01-24-2011 07:31 AM #11
ay:awmfrlvmao;oaygh ukdcrf;vIdif . . . . .
w&kwfjynfukd ar;awmhvnf; rod . . . .
jrefrmjynfu owif;vnf;rMum;awmh b,frsm;aysmuffaejyDvnf;vkd. . . . . .
oDcsif;vn;f qkdxm;ao;w,fvm; . . . . .
khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, Mahuya, maintmaintt, mathibu, mokenlay, mrlynn, orjawlan, sunny007, thatonthu, winekyaw, Winnermann
01-25-2011 02:54 PM #12
Wannabe Cupid I loveacute cartoon avatar.
Thanked 389 Times in 46 Posts
uRefawmfu xm;0,fom;qdkawmU xm;0,fuae &efukefvm&if rGefjynfe,f armfvjrdKif oHjzLZ&yf tukefjzwfvm&wmyg/ um;eJvmwm qdkawmY um;vrf;rab;u &GmawG jrdKUawGeJUawmU tuRrf;0if&Sdygw,f/
oefvGifjrpful;wHwm; MuD;qdk t&rf;oabmuswm/
&xm;eJY &efukefvmwkef;uvnf; armfvjrdKif blwmrSm ntdyf&ygw,f/
blwmtem;rSm wnf;zdkY tdrfav;awG &Sdovdk wnf;cdkcef;awGvnf; &Sdygw,f/
wpfntwGuf 3000 usyfavmufeJUqdk&if jzpfr,fxifygw,f/
armfvjrdKifrSm raezl;ayr,fUjzwfoGm;aeus qdkawmY &if;ESD;aeygw,f/
rGefoli,fcsif; awmfawmfrsm;rsm;vnf;&Sdygw,f/ cifzdkUawmU aumif;om;/
aprilcold, Botazan, fridayborn, happyvalley, islandnyo, k-pooh, khanhlaing, kokokyaik, koluchaw, komoegyi, Mahuya, maintmaintt, mathibu, mokenlay, mrlynn, orjawlan, sunny007, thatonthu, winekyaw, Winnermann
01-27-2011 12:45 PM #13
မငေးလအောင် .... ဘန်းကျော်ပြန်ရောက်ပြီးသကလ ဓါတ်ပုံတွေအများကြီး ရိုက်ထားပါတယ် ...
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံတင်ဖို့က တော်တော်လေးကြာလို့ ပြန်ရောက်မှ တင်ပေးပါမယ် ... ဖိုင်ဆိုဒ်လျှော့ထားပြီးတင်ရင်တောင်တော်တော်လေးကြာပါ တယ် .... ပြီးတဲ့ရက်တွေက အမ်ပီတီလိုင်းက
တော်တော်စုတ်တာဆိုတော့ မိုးကိုသည်းရော .... မီးတော့မှန်ပါတယ် .. နေ့တိုင်းလာပါတယ် ... ည ၇ နာရီ
၈ နာရီလောက်ဆို ဗို့က ၁၅၀ ပဲရှိတယ် ... အစားအသောက်ပုံတွေလည်း အများကြီးရိုက်ထားပါတယ် ..
တရက်မော်လမြိုင်တက်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ပါ့မယ် ... မွေးသမိခင်ကတော့ ည မအိပ်ရဘူးတဲ့ .. ပြီးတဲ့နှစ်က
ဆိုင်ကယ်ဖျောက်စားတာကို လန့်လို့ ... ရာသီဥတုကတော့ အခုတော့ညဦးပိုင်းက ပူနေပါပြီ .. ညနက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အေးပါတယ် ... ပြီးတဲ့ရက်တွေကတော့ တော်တော်လေးအေးပါတယ် .. ညနေက စစ်သချိုင်းကပုံကို အပ်လုပ်တင်ကြည့်တာ အဆင်မပြေဘူး ... þwGifowif;rsm;ukd aMumNimvkdYNyD;ygNyD
aprilcold, Botazan, fridayborn, islandnyo, k-pooh, Kaung Lay Luck, khanhlaing, kokokyaik, koluchaw, Mahuya, maintmaintt, marchman9, mathibu, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, winekyaw, Winnermann, Yamarmoto
သထုံမြို့ ရွှေစာရံစေတီတော်ကြီး အရှေ့တောင်ဘက် ကလျာဏီသိမ်စနေထောင့်၌ရှိသော သထုံကလျာဏီကျောက်စာ မွန်ဘာသာ ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပီး ဝေမျှနိုင်မလားခင်ဗျာ၊ ရှေ့လျှောက်ရောက်ဖို့ မလွယ်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
aprilcold, fridayborn, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, mokenlay, orjawlan, ShweTintte, thatonthu, Winnermann
02-08-2011 08:48 AM #15
awmif;wm &uf20 avmufaemufusoGm;ygw,f/
tJ'Dem;rSm ausmufpmxm;wJhae&mawG trsm;MuD;/
tarwdkY i,fi,fuqdk ykef;wrf;aqmhMuwmwJh/
oxHku oli,fcsif;udkawmh vSrf;ar;xm;w,f/
ulrJholu tifwmeufroHk;wwf? 'pf*spfw,fuifr&m r&Sd&if/
aemufwacgufoxHkoGm;jzpf&ifawmh &dkufcJYayr,faemf/ ae&mujrdKYxJawmh jrdKYv,fae&myg/
trSefwdkif;ajym&&if usrawmif tJ'Dae&m udk 1993avmufu wacgufyJa&mufwm/ uyfausmfwm/ uav;qdkawmYausmufpmvJ pdwfr0ifpm;ao;bl;av/
aprilcold, fridayborn, GreenHat, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, mokenlay, mrlynn, orjawlan, Winnermann, Yamarmoto
02-08-2011 09:29 AM #16
ကလျာဏီသိမ်ကျောက်စာ မွန်ဘာသာဆိုတော့ တစ်ချပ်တည်းတော့ဟုတ်မယ်မထင်။ အနည်းဆုံး ၇ ချပ်လောက်တော့ရှိမလားဘဲ။ ကျနော်လည်းဖတ်သာဖတ်ဖူးတာမမြင်ဖူးဘူးဗျို့။ ကျောက်စာဆိုရင်တော့ အကုန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ အားလုံးကိုခြုံပြီး ရိုက်ထားတာရယ်၊ တစ်ချပ်ချင်းစီကိုရိုက်ထားတာရယ်၊ စာလုံးတွေဖတ်လို့ရအောင်အနီးကပ်ရိုက်ထားတာရယ် ၊ ကျောက်စာချပ်ထိပ်ပိုင်းမှာ ကျောက်စစ်ဒီဇိုင်းပါတတ်လေ့ရှိလို့ အဲဒီ ဒီဇိုင်းပုံကိုအနီးကပ်ရိုက်ထားတာရယ် စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့လေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။ ဟီး ။ တချို့ကျောက်စာတွေက မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးမှာစာရေးတတ်တယ်၊ တချို့ကတော့မရေးဘူး စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့လေ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။
ခုတော့ ကူညီမယ့်လူက အင်တာတက်မသုံးတတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကြီးမဟုတ်ရင်တော့ လွယ်မယ်မထင် ။ ကျောက်စာတွေတကယ်ရှိ/မရှိ ၊ ဘယ်လောက်ထိအခြေနေ ဆိုးနေပြီလဲဆိုတာမြင်သာနိုင်တဲ့ အိုဗာအော ပုံတစ်ပုံရရင်ဘဲဖြစ်ပါဘီဗျာ
အသက် ၄၅ ကျော်လို့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်သွားပြီး ရိုက်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။
fridayborn, GreenHat, khanhlaing, kohtwe, koluchaw, mokenlay, orjawlan, thatonthu, Winnermann, Yamarmoto
02-08-2011 10:02 AM #17
aemufwacguf oxHkoGm;&awmhr,fxifw,faemf/ OD;abm hwdkYrSmuifr&mMuD; &Sdw,f/ pyGefqmay;rvm; ar;MunfhOd;/ usrawmh oGm;zdkY tyk vdkw,f/ cPcP oGm;aeawmh tdrfu rsufapYaemufaevdkYav/ c&D;oGm;azmfuvJ tvkyfoGm;jyDav/ acgif;xJrSm&Sdw,f/ MudK;pm;yghr,f/
fridayborn, GreenHat, khanhlaing, koluchaw, mokenlay, mrlynn, orjawlan, Winnermann, Yamarmoto
02-08-2011 10:07 AM #18
oxHkoGm;wkef; &dkufcJhwJh yHkawG tckxdrwif&ao;ygbl;/
tyfvkyf udkr&wm/ b,fol ulwifay;rvJ[if/
ulnDol&JY tD;ar;udk yDtrfay;ygOD;/
u&ifESpfopful;yGJyHkudk t"du wifcsifaewm/
aprilcold, fridayborn, GreenHat, khanhlaing, kohtwe, koluchaw, mokenlay, mrlynn, orjawlan, Winnermann, Yamarmoto
02-08-2011 01:20 PM #19
Originally Posted by thatonthu
ကျနော်ကအဲဒိဘက်ရောက်ကိုမရောက်ဖူးသေးတာ၊ သထုံမြို့ဟောင်း ၊ အရက်သမရွာ ၊ ကော့ကွန်းဂူ စသဖြင့် ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းလောက်တော့ ဆွဲလိုက်ချင်သားဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါ။
သထုံဘက်ရောက်ရင်တော့ဖြင့် ကလျာဏီကျောက်စာကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ။ သွားဖြစ်မှပါဗျာ။
နို့......ဒါနဲ့ ဦးဘော့ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်းဗျ။ တကယ်မသိလို့ပါခင်ဗျ။
(စောရီး စောရီး ဘာရယ်မဟုတ်ဖူး စောစောက ပိုစ်တစ်ခုကို ဖတ်နေရင်း ဦးဘော့ (Botchan)ကိုသိသွားပါပြီခင်ဗျ။)
Last edited by mrlynn; 02-08-2011 at 03:40 PM.
aprilcold, fridayborn, GreenHat, Kaung Lay Luck, khanhlaing, kohtwe, mokenlay, orjawlan, thatonthu, THIHA, Winnermann, Yamarmoto
02-09-2011 09:35 PM #20
armfvNrdKif-&effukef vdkif;topf ajy;qGJaewJh ]w’ref - wvrGef} um;yg/
rGefjynfe,f-yJcl;wdkif; e,fpyf? odrfZ&yftem; ]ppfawmif;wHwm;} topfyg/
rGeffjynfe,f? bDvif;NrdKUe,f? bDvif;wHwm; ESifh teD;tem; ywf0ef;usifyg/
(4.1.2011) &ufaeYwGif rGefjynfe,f? oxHkNrdKUe,f? wHwm;OD;aus;&GmrS usif;ycJhMuwJh ]u&ifESpfopful;yGJawmf} trSwfw& yHkav;awG jzpfygw,f/
**** roxHkol&JU "gwfyHkawGudk ulwifay;wm jzpfygw,f/ usefwm roxHkol quf&Sif;jy ay;ygvdrfhrnf ****
fridayborn, GreenHat, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, komoegyi, maintmaintt, marchman9, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, sunny007, talkyboy, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann